That's so good, right?: A Wank in the Woods
ကျွန်တော် masturbate လုပ်တာကို တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သဘာဝအတိုင်း အ၀တ်မပါနေရတာ၊ အ၀တ်တွေကိုချွတ်ပြီး ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် သစ်တောထဲမှာ ပုန်းကွယ်ရင်း ကစားရတာကိုလည်း သဘောကျတယ်။ ထားပါတော့ masturbate လုပ်တာမူမမှန် ဘူးလို့ပဲဆိုချင်ဆို၊ ပါတနာရဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပါတနာမရှိတဲ့သူတွေလုပ်တဲ့ အလုပ်လို့ ဆိုချင်ဆိုမယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ပါတနာ နဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီးတာတောင် တစ်ခါတလေ အာသာမပြေရင် -ွင်းထုလိုက်မှ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပြည့်စုံတတ်တာဗျ။ သစ်ပင်တွေနှင့် ဖုံးနေ တဲ့ တောထဲမှာ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပြီး ကမြင်းရတာကလည်း အော်ချင်သလိုအော် လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရမဲ့ အခွင့်အရေးရနေလို့ ကိုးလေ။
June လရဲ့ နေသာသောနေ့တစ်နေ့မှာ မနက်စောစောထပြီး တောဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့မိပါတယ်။ အလုပ်ကလည်း အေးဆေးဆိုတော့ ရုံး တက်ဖို့ ဘာညာပူစရာမလို။ ဟုတ်တယ်လေ...သူများအလုပ်လုပ်နေရသူဆိုရင်တော့ အဲဒါတွေကို ပူပန်နေရဦးမှာမဟုတ်လားဗျ။ တော ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြို့ကလေးရဲ့ မနီးမဝေး သဘာဝသသစ်တောကြိုးဝိုင်းကြီးပေါ့။ သစ်ခုတ်သူ တောလိုက်သူမရှိ သစ်တောဌာနက ၀န်ထမ်းအချို့သာ တစ်ခါတလေ လှည့်ပတ်စစ်ဆေးတတ်တဲ့နေရာ။
ကားပါကင် ထိုးဖို့နေရာက သီးသန့်မရှိတော့ သစ်တောအရာရှိတွေလာရင် ရပ်လေ့ရှိတဲ့နေရာမှာ မောင်းလာတဲ့ ဂျစ်ကားကို အသာထိုး ရပ်လိုက်ရတယ်။ ကားပေါ်ကဆင်း လူသွားလမ်းလိုဖြစ်နေတဲ့ လမ်းသွယ်လေးထဲ ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပြီး ဟိုသည်ကြည့်လိုက်တော့ ကျေးငှက် သံ တကျည်ကျည်သာကြားရတာကြောင့် လှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းကိုရပ်ကာ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့အ၀တ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စတင်ဖယ်ရှား ပါတယ်။ တီရှပ်ကို ခေါင်းပေါ်ကနေ ဆွဲချွတ်၊ ၀တ်ထားတဲ့ ကွာတားဘောင်းဘီကိုအောက်ဆွဲချ၊ ခြေထောက်မှာ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ sneaker တွေကို ကန်ချွတ်သပေါ့။ ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်လေးဆောင်းပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီလေးနဲ့သာ သစ်တောအလယ်မှာရပ်နေရတာ အတော် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ရိုးရာ အဖြူရောင် brief ဘောင်းဘီကိုဝတ်ထားတာဗျ။ အဖြူရောင် အတွင်းခံကြပ်ကြပ်က အချို့သော အကြောင်းပြချက်များအတွက် အလွန် sexy ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားရစေပါတယ်။ အပြင်ဘက်မှာ ကျွန်တော် အတွင်းခံအဖြူလေးဝတ်ပြီးနေရ တာ လန့်စရာတစ်ခုကောင်းရဲ့။ ဒါကြောင့် ခြုံပုတ်တွေကြားမှာပဲ အသာရပ်နေမိသေးတာပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ကျွန်တော်အခု နေမြင်ရရင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အခု အတွင်းခံထဲမှာ ပုန်းကွယ်နေတာပဲနော်။ ပူနွေးနေတဲ့ နေ ရောင်ခြည်နှင့် အေးမြနေတဲ့ လေပြည်လေညှင်းတွေက ကျွန်တော့်အရေပြားတွေကို ကျီစယ်နေပြန်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ရှေ့ ဆက်လှမ်းစေပါ၏။
ခြေလှမ်းကို အသာလှမ်းပြီးသွားချိန်မှာ ကျွန်တော့် brief ထဲမှာ ညီဘွားက ခေါင်းထောင်ပြီးနေပြီဆိုတာ ခံစားရ့ပါတယ်။ နုညံ့တဲ့ cotton စအပေါ်ကနေ ကျွန်တော်ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ကြည့်တယ် ညီဘွားကိုလေ။ အင်း......so good! မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော့်အတွင်းခံ ဘောင်းဘီရဲ့ အရှေ့ပိုင်းဟာ မိုးကာတဲ တိုင်ထောင်ထားသည့်အလား ဖြစ်လာတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ဖာသာ ငပဲကို အသာဆက်လက် ပွတ် သပ်ရင်း ရွှေဥတွေကိုပါ အသာဖျစ်ညှစ်ပါတယ် နုညံ့တဲ့ ချည်စပေါ်ကနေ။ ငြင်ငြင်သာသာလဲ မာတောင်နေတဲ့ငပဲရဲ့ outline အတိုင်း ပွတ် သပ်သေးတာပါ။ တင်းရင်းပြီး လုံးကျစ်နေတဲ့ တင်သားတွေကိုလည်း cotton စပေါ်ကနေပွတ်သပ်ပါသေးတယ်။ ခဏကြာတော့ ကျွန်တော့် briefs ဘောင်းဘီရဲ့ရှေ့မှာ အရည်ကြည်အကွက်တစ်ကွက် ထွက်ပေါ်လာပါရော။ ကျွန်တော့်ညာဘက်လက်ကို ဘောင်းဘီ ထဲလျှိုထည့် pre-cum တွေစို့ နေတဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်မိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ နောက်ပြန်မဆုတ်ချင်သလို၊ အရသာကို ဆုံးခန်းမတိုင်စေချင်သေးပါ။ ဒါကြောင့် ကစားနေတာကို ကိုယ့်ဖာသာ ရပ်လိုက်ပြီး အတွင်းခံကို ၀တ်ဆင်ပြီး အပြင်မှာ လမ်းလျှောက်ရတဲ့ အရသာကို ဆက်ခံစားပျော်ရွှင်လိုက်ပါတယ်။
မာတောင်နေတဲ့ ငပဲဟာ ဘောင်းဘီထဲမှာ တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားရင်း ပြန်ပျော့သွားပါရဲ့။ သားမွှေးအလားနုညံ့မယ့် အစိမ်းရောင် ကမ္ဗလာပြင်ကျယ်ကြီးအစွန်းတစ်ခု အရောက်မှာတော့ ကျွန်တော်အတန်ကြာရပ်ပြီး ငေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်အစုံဟာ ဘောင်းဘီ မျှော့ကြိုးဆီရောက်သွားပြီး ဒူးဆစ်တွေထိ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပါရော။ ကျွန်တော့် ဒစ်ကြီး၊ ရွှေဥတွေနှင့် ဆီးစပ်က ခြုံပုတ်ငယ်လေးတွေကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားကို ငုံ့ကြည့်မိတော့ ညီဘွားကငြိမ်သက်နေဆဲ။ လေနုအေးအေးတွေဟာ ကျွန်တော့် တင်ပါးတွေပေါင်ကြားတွေကို ခပ်ပြင်းပြင်းပွတ်သပ်နေသယောင် ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော် မြက်ခင်းထဲ ဖြည်းညင်းစွာလျှောက်သွား လိုက်ရင်း အသာဒူးထောက်လိုက်တာ နုညံ့တဲ့မြက်ပင်များက တင်ပါးဆုံတွေ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းကို ပွတ်သပ်နေသလို လေအနော့မှာ ဆော့ကစားနေတာ။ မကြာပါဘူး ညီဘွားက ခေါင်းပြန်ထောင်ထလာပါပြီ။ နောက်တော့ ကျွန်တော် မြေအမာရှိရာဘက် ခပ်ဖြေးဖြေးလှဲအိပ်လိုက်တာ ကျွန်တော့် ရင်အုပ်၊ ဗိုက်သား၊ ငပဲ၊ရွှေဥ၊ပေါင်ခြံအရာအားလုံး မြက်ခင်းရဲ့ နုညံ့မှုထဲ။ မြက်ပင်ရဲ့ ပွတ်သပ်မှု ထဲ ငြိမ်နေမိပြီးမှ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကစား တင်ပါးတွေကို မြက်ပင်တွေနှင့် ပွတ်သပ်နှိုးဆွသပေါ့။ ထူထူထဲထဲပေါက်နေတဲ့ မြက်ပင် တွေကြား မာတောင်နေတဲ့ ငပဲကို ခပ်သွက်သွက် ထိုးသွင်းကစားမိတာ ယုန်ကလေးတစ်ကောင် တင်ပါးဆုံလှုပ်ပြီး ကနေသလိုပါပဲ။ မြက်ပင်များရဲ့ နုညံ့မှုကြောင့်ရော စိတ်လွတ်လပ်မှုကြောင့်ရောထင့် သွေးတွေ အစွမ်းကုန်ဆူပွက်လာသလို ခံစားမိကာ ပါးစပ်က အသံ ကျယ်ကျယ် အော်ညည်းမိပါပြီ။ Oh fuck! ကျွန်တော် လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ မဖြစ်ချင်သေးဘူးလေ။ ကျွန်တော်မြက်ခင်း တွေပေါ် ပစ်လှဲလိုက်ကာ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် လှဲလျောင်းနေမိပါတယ်။ အသက်ရှူသံ ခပ်ပြင်းပြင်းတွေ ပုံမှန်ဖြစ်သွားသလို ပေါင်ကြားက ညီဘွားကလည်း ပြန်အနားယူသွားပါရဲ့။ အေးဆေးဖြစ်သွားတော့ ကျွန်တော် ဒူးခေါက်ကွေးက အတွင်းခံဘောင်းဘီကို အဆုံးတိုင်ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အခုကျွန်တော့်ကိုယ်မှာ အ၀တ်တစ်ခုမှ မရှိတော့ပါ။
ကျေးငှက်သံတွေ မြည်နေတာနှင့်အတူ လေပြည်သွဲ့သွဲ့ထပ်မံတိုက်လာချိန်မှာ ကျွန်တော်ထရပ်လိုက်ကာ မြက်တောရဲ့ အလွန် လမ်းသွယ်တလျှောက် ဘောင်းဘီကို လက်တစ်ဖက်ကဆွဲ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဆက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက် လာသံကြား ရင်တော့ သစ်တောအုပ်ထဲ ပြေးဝင်ပြီး ပုန်း သို့မဟုတ် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ကောက်ဝတ်လို့ရတာပေါ့နော် သူတို့မမြင်ခင်လေ။ သစ်တောအုပ်ထဲ အ၀တ်မပါ တစ်ကိုယ်တည်း အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလျှောက်ရတဲ့ ဖီလင်က အရမ်းမိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ကြာရှည်တော့ ပျော့မနေပါဘူး။ တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေါ်ရယ် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဆိုတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် မကြာပါဘူး ပြန် လည်မာတောင်လာကာ ရှေ့သို့ လမ်းညွှန်နေပါရော။ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေဟာ ပေါင်ခြံကြားမှာ ပျင်းရိပျင်းတွဲ မဖြစ်တော့ဘဲ ကျွန်တော် ခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်ပါနေသလို တင်ပါးများဆီက နေရောင်ခြည်ရဲ့ နွေးထွေးမှုကိုလည်း ခံစားနေရပါတယ်။ ခြေလှမ်းတွေကို ခဏရပ် ငပဲကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ လက်ကစားမိပါရဲ့။ သုံးလေးချက်မက ကွမ်းသီးခေါင်းမှာ ကစားလိုက် အောက်ခြေရင်းမှာကိုင်ပြီး ခါးကစားလိုက်လည်းပါတာပေါ့။ ဖီလင်အရမ်းမိုက်ပြီး ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်တွေစိမ့်ထွက်လာ ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် ဆက်မလှုပ်ရှား ဘဲ ရပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ နေရောင်တွေ ဖြာကျနေတဲ့ သစ်တောထဲ အ၀တ်မပါ ငပဲကို ရွှေဥကို ဆုပ်ကိုင်ကစားရင်း လမ်းဆက်လျှောက်မိ တယ် ခဏပေါ့။
နောက် ၁၀မိနစ် သို့မဟုတ် အားလပ်ချိန်ပေးတဲ့ခဏလေးမှာ သစ်ပင်ခပ်အုပ်အုပ်ကြီးတစ်ပင်အောက် ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့် ငပဲဟာ အရမ်းခေါင်းထောင်မထတော့ပဲ မမာ့တမာအနေအထားဖြင့် မြေပြင်ကို လမ်းညွှန်နေတာ အရမ်းတော့ မလိမ္မာဘူး ခေါင်းမာချင် သေးတာ။ လက်နှင့်အပြည့် သစ်ရွက်တွေကို ကျွန်တော် ကိုင်းတစ်ကိုင်းမှယူလိုက်ကာ ပေါင်ခြံတွေ ရွှေဥတွေနှင့်အတူ ငပဲခပ်ရှည်ရှည့် အောက်မကျန် တို့ထိကစားပါတယ်။ ပြီးတော့ သစ်ရွက်တွေနှင့်ရောပြီး ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ သာသာယာယာ-ွင်းထုဖြစ်ပါရဲ့။ အဲဒီလိုလုပ်တာ မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကျောက်ဆိုင်ကျောက်သားအလားပြန်ဖြစ်လာစေပါတယ်။ လက်နှင့်တိုက်ရိုက်မထိပါ ဒီတစ်ခါတော့ သစ်ရွက်များဖြင့်။
ကျွန်တော်ဆက်ပြီး လမ်းလျှောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ သစ်တုံးအကြီးကြီးတစ်တုံးလဲနေတဲ့နားရောက်သွားရော။ သစ်တုံးကြီးကို ကျွန်တော်ခွပြီးထိုင်လိုက်တယ်။ အ၀တ်မပါ ပေါင်တံတွေကြား ပင်စည်အကြီးကြီးရောက်နေတာကို ခံစားမိရသလို တင်ပါးတွေ၊ ရွှေဥတွေ ဟာလည်း ကြမ်းရှတဲ့ သစ်ခေါက်များပေါ် အနားယူနေခြင်းပေါ့။ အတန်ကြာထိုင်နေရင်းမှ ဘာဖြစ်တယ်မသိ ကြမ်းရှတဲ့အတွေ့မှာပဲ သာယာရင်း ငပဲဟာ အလံတိုင်တစ်ခုထောင်လာသလို ခေါင်းထောင်ထလာပါတယ်။ ငပဲရှည်ရှည် ထွားထွား ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပိုင်ဆိုင်ရ သောအရာကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်လိုက်ပါရဲ့။ လက်မတွေနှင့်ချုပ်ကိုင်ထားသလို လက်ချောင်းတွေနှင့်ရစ်ပတ်ကာ အထက် အောက်လှုပ်ရှား လက်ကစားသပေါ့လေ။ သစ်တုံးက တကယ်တော့ မြေပြင်ပေါ်ထိကပ်နေတာမဟုတ်ဘဲ လှုပ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော် လှုပ်ရှားတိုင်း ပြန်ပြန်ခုန်နေတာ။ စိတ်ထဲပျော်လာသလိုခံစားရကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားပြောမိပါတယ် -ွင်းထုရင်း ' I love my penis' ။ ပြောရင်း အသံ ကျယ်ကျယ်အော်ပစ်လိုက်တယ် ' -ီးကိုကိုင်ပြီး -ွင်းထုရတာ သောက်ရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ'။ ကျွန်တော့်ငပဲကို ခပ်တင်း တင်းဆုပ်ကိုင်ထားတာ ' -ီးကသောက်ရမ်းကိုမာနေတာ' စကားအော်ပြောလောက်အောင်မာပါရဲ့။ ' -ီးကို ကိုင်ပြီးကစားရတာလောက် ကောင်းတာမရှိဘူး' ။ 'OHHHH, OHHH FUCK..တောင်နေ တဲ့-ီးကို ကိုင်ပြီးထုရတာအရမ်းကောင်း' သစ်ပင်ကြီးကလှုပ်လိုက်၊ ခပ်တင်း တင်းဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့လက်ထဲ တင်ပါးကိုလှုပ်ရှားကာ အထုတ် အသွင်းလုပ်လိုက်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ပြီးဆုံးချင်တဲ့ ဆန္ဒမရှိသေးပါဘူး။ ကျွန်တော် အဆုံးစွန်တဖက်မှာရပ်လိုက်တာ အသက်ရှူမှု အရမ်းပြင်းနေတာ၊ ကျွန်တော့်ငပဲရှည်ရှည် twist ကနေတာ၊ ရွှေဥတွေ လှုပ်ရှား နေတာက အစဉ်လိုက်။ ကျွန်တော်သစ်လုံးပေါ်ကိုမှောက် မျက်ခုံး တွေနှင့် သစ်လုံးထိတဲ့အထိရှေ့ကိုကိုင်းလိုက်တာ ကျွန်တော့်ဗိုက်သား နဲ့ သစ်လုံးကြား ထောင်ချောက်မိသွားပေါ့။ အဲဒီ့အခြေအနေ အတိုင်း ဆက်နေရင် မကြာခင်ကိစ္စပြတ်သွားနိုင်တယ် နေရာထပ်ရွှေ့ဦး မှလေ။
ကျွန်တော်သစ်တောထဲ ပိုနက်တဲ့အထိ လမ်းလျှောက်ဝင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲလည်း -ွှုးအရမ်းထုလို့နီရဲနေပြီ။ ကျွန်တော်ဟာ လိင်စိတ် အရမ်းကြွနေတဲ့ ကောင်လေးပဲ။ ခပ်ကြွားကြွားငပဲကို စိုးရိမ်တကြီးဆုပ်ကိုင် ကစားလိုက်နားလိုက်လုပ်နေတာ ရွှေဥထဲမှာလည်း သုတ်ရည် တွေက ပန်းထုတ်ဖို့ ခုန်ပေါက်နေပြီ။ ကျွန်တော့်လက်တွေကို မိနစ်နည်းနည်းလောက် မကိုင်မိစေဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ငပဲက ဆက်လက်မာတောင်နေဆဲပါ။ ဘာကြောင့်ဆို စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွစွာပွတ်သပ်ထားမှုကြောင့်ရော တစ်ကိုယ်တည်းလွတ်လွတ် လပ်လပ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုကြောင့်ရောပါမယ်။ ကုသိုလ်ထူးစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ငပဲလှလှကို အရင်းကနေဆုပ်ကိုင် ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို လက်ဖျားလေးနဲ့ပွတ်သပ်ရင်း ကြည်နူးမိသေးတယ်။ အနက်ရောင် သစ်သားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ အပင်ကြီးမှာ အခေါင်းပေါက်ကြီးက သစ် ဖောက်နွယ်ပင်လို အကွင်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော့်ငပဲခပ်ထွားထွားကို ထည့်သွင်းလိုက်ကာ မြင်းစီးသလို လှုပ်ရှာလိုက်တာ ခပ် မာမာအသားက ချောမွေ့ပြီးနေလို့ ကျွန်တော့်ပစ္စည်း အနာမရတယ်။ ဒီအချိန်မှာများ လူတစ်ယောက်လောက် ကျွန်တော့်ကိုတွေ့ရင် တောထဲမှာ အ၀တ်မပါဘဲ သူ့-ီးကို ကစားနေတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့လူလို့ မြင်သွားကြမလား စဉ်းစားမိသေးရဲ့။ ဂရုမစိုက်ပါဘူးလေ ကျွန်တော့် ငပဲကို အရသာထူးကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရင် ဘာပဲလုပ်လုပ်။ နောက်တစ်ကြိမ် အဆုံးစွန်ရောက်ခါနီးမှာ ကျွန်တော်ရပ်တန့်လိုက်ကာ လမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတိုင်း ဆက်လျှောက်မိပြန်တယ်။ ဒေါသကြောင့် တဆတ်ဆတ်မာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားဟာလည်း ပေါင်ကြားမှာ ရှေ့ကို လမ်းညွှန်လို့။
နောက်ဆုံး ကျွန်တော် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နေမင်းကြီးအောက်မှာ သစ်တော ခပ်နက်နက်ထဲ လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ သစ်တော ကြမ်းပြင်ကြီးဟာ ရွက်ကြွေဟောင်း ကမ္ဗလာနှင့် ဖုံးအုပ်ထားပါလေ့။ ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ဆုံး -ွင်းထုတာရဲ့ အကောင်းဆုံး သင့်တော်တဲ့နေရာဖြစ်မှာ။ ကျွန်တော် သစ်ငုတ်တို တစ်ခုမှာ ထိုင်ပြီးနားလိုက်ကာ ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ထိုးကျနေတဲ့ ပူနွေးသော နေရောင်ခြည်ကို ခိုလှုံမိသလို သစ်ရွက်ကလေးတွေရဲ့ ၀ီစီမှုတ်သံကို နားထောင်နေဖြစ်တယ်။ သစ်တောကြမ်းပြင်ပေါ် နေရောင်ခြည်ရဲ့ နွေးထွေးမှုကို အတန်ကြာ ခံစားနေပြီးမှ ပေါင်ကြားထဲက ခပ်ရှည်ရှည် ငပဲကို အသာအယာစပြီး ခပ်ဖြေးဖြေးပွတ်သပ်ပါရဲ့။ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကိုလည်း ညင်သာစွာ ပွတ်သပ်မိပြန်ရော။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စက်ဝိုင်းပုံ၊ ရွှေဥတွေို့ အသာဆုပ်ညှစ်၊ ခရေပွင့်ကို လက်ချောင်းလေးဖြင့် စမ်းသပ်၊ အပြည့်အ၀မာတောင်နေတဲ့ -ီးကို ညင်သာစွာနှင့် ဖြည်းငြင်းစွာ အထက်အောက်ကစား...အာ.... so good! တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလာတဲ့ ဖီလင်အရှိန်တွေမြင့်တက် ပိုင်ဆိုင်ရပါပြီ။ ခပ်တိုးတိုး ကိုယ့်ဖာသာ ညည်းညူမိရင်း..... လက် တစ်ဖက်က ရွှေဥအောက်ခြေမှ အထိအခိုက်သိပ်မခံတဲ့နေရာကို ပွတ်သပ်၊ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝန်းကျင်ကို ပွတ်သပ်ကစား၊ ပြီးတော့ တခြားလက်က ကျွန်တော့် နို့သီးခေါင်းတွေကို ညှစ်ပြုမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေ ပွတ်သပ်လိုက်၊ ဖျစ်ညှစ်လိုက်၊ဆွဲကိုင်လိုက် ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေထဲမှာ လူးလိမ့်နေစေတာပေါ့။ မာတောင်နေတဲ့ ငပဲကိုလည်း လက်နဲ့အောက်ကိုဖိပြီး လွှတ်လိုက်တာ ဗိုက်သားကို ဘတ်ကနဲ ပြန်ကပ်ရဲ့။ အဲဒီနောက်မှာတော့ တစ်ချက်ခြင်း နုညံ့တဲ့လက်ကစားမှုဖြင့် သာယာပါတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို အသာအယာပွတ်သပ် ငပဲကိုခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ တစ်ချက်ခြင်းပေါ့။
စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း အပြင်ကို ဖွင့်ထုတ်အော်ဟစ်လိုက်မိပြန်ပါတယ်။ 'အား.....-ီးကိုကိုင်ပြီး -ွင်းထုရတာ ကြိုက်တယ်ကွာ'.... သိပ်မမာတဲ့ မြေပြင်ပေါ် ကျွန်တော် ဒူးထောက်လိုက်ကာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ငပဲကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားရင်း တင်ပါးတွေကို ကစားကာ တစ်ယောက်ယောက်ကို fuck သလိုမျိုး အသွင်းအထုတ်လုပ်မိပြန်တော့ စိတ်အဟုန်က မြင့်တက်လာပြန်ပါရော။ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှား မှုကြောင့် ရွှေဥတွေက တဖတ်ဖတ် အသံမြည်စေပါတယ်။ မောပန်းလို့ မြေပြင်ဆီလှဲမိပြန်တော့ လက်ချောင်းနှစ်ခုကို ခရေ၀ဆီ တဖြည်း ဖြည်း ဖိသွင်းကြည့်မိတာပေါ့။ တံတွေးစွတ်ထားလို့ စိုနေတဲ့ လက်ချောင်းများဖြင့် ခရေ၀ကို စက်ဝိုင်းပုံပွတ်သပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်း အသွင်း အထုတ်လုပ်ကြည့်ခြင်း။ 'အ...အာ...အ' မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ တသိမ့်သိမ့် ခံစားပြီးနောက် လှုပ်ရှားမှုကို ခဏရပ်ကာ ငြိမ်သက်လိုက် ပါတယ်။
ကျွန်တော် သစ်တောကြီးရဲ့ သစ်ရွက်ကမ္ဗလာကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်အိပ်ချလိုက်ပါတယ်။ မာနေဆဲငပဲကို ညာဘက်လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင် လိုက်ရင်း နည်းနည်းမြန်မြန်နဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်း စကစားဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကလည်း ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ကစားနေတဲ့ အထဲက အပေါ်ကိုပင့်ပင့်ပြီး သွင်းတာမှ ငပဲဟာ မိုးပေါ်တည့်တည့်ချိန်လျက်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်း ချွေးတွေနဲ့ ရွှဲစိုနေသလို အသက်ရှူသွင်းရှုထုတ်တာတွေကလည်း ပြင်းလာပြီ။ ကျွန်တော့် အသက်ရှူသွင်းတာတွေ နှုတ်ဖျားက ညည်းတွားသံတွေဟာ ဖုံးကွယ်စရာမလိုတဲ့ တောတွင်းဝယ် ကျယ်လောင်စွာပေါ့။ ငပဲခပ်ထွားထွားကိုလည်း မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ကစားမိသလို တင်ပါးစုံကိုလည်း စက်သေနတ်ပစ်သလို အဆက်မပြတ် ပင့်မြှောက်လေတော့တာ။ ပါးစပ်ကလည်း ခပ်ကျယ်ကျယ် စကားသံတွေဖြင့် အော်ဟစ်ပစ်လိုက် တယ်။ 'FUCK, OHHHH FUCKKKKK….OOOOOOOOHH MMM OH FUCKKKK I LOVE WANKING MY BIG HARD COCK!' တစ်ကိုယ်တည်း အရူးအမူး လူးလိမ့်မိတဲ့အထိ သွေးတွေ အရမ်းဆူပွက်ခံစားရကာ အဆုံးစွန် အမြင့်ပန်းတိုင်ဆီ ရောက်ဖို့ သိပ်မလို တော့ပြီလေ။ 'ပြီးတော့မယ်.....အား....အ......သောက်ရမ်းမိုက်တယ်....အ...အား...ရှီး' ရုတ်တရက် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်က ပူနွေးသော အရည်ပျစ်တွေ ပန်းထွက်သွားသလို တင်ပါးက ကြွက်သားတွေ ကျစ်လစ်သွားရကာ နောက်ကျောပြင် ကြွက်သားတွေ တုန်ခါရင်း စိတ်ရှိ လက်ရှိကို အော်ပစ်လိုက်တယ်။ 'OHHH….OHHH..အ...OOOHH…OHHHHH!' ဗိုက်သားတွေ၊ ရင်ဘတ်တွေပေါ်တင်မက မျက်နှာပေါ် တောင် အများအပြားရွှဲစိုသွားရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ပြီး ကစားရင်း အရသာခံ မိပါသေးတယ်။ ရွှေဥတွေကို ဖျစ်ညှစ်ရင်း သက်ပြင်းမျော့ မျော့ချရင်းပေါ့။ သစ်တောကြမ်းပြင်ပေါ်ဝယ် သစ်ရွက်အိုတွေကြား ချွေးတွေရွှဲစိုဖုန်တွေလူး အ၀တ်မပါငြိမ်သက်စွာအသက်မှန်မှန် ရှူရင်း လှဲလျောင်းနေမိပါတယ် ခဏတော့။ အခုချိန်တော့ အဆမတန် မာတောင်ရှည်လျားခဲ့သော ငပဲဟာ ပေါင်ခြံဝယ် လှဲပြီးအနားယူနေပြီ။ ရွှေဥထဲကလည်း တဆတ်ဆတ်လှုပ်ရှားသွားသေး ဘာမှမရှိတော့ပေမဲ့။ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပြီး အဆုံးစွန်ပြီး မြောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ masturbation session တစ်ခုလည်းဆိုတာ။
ကာလအကြာကြီး အနားယူခဲ့သလို ခံစားငြိမ်သက်နေပြီး ခဏမှာတော့ ခပ်ယိုင်ယိုင်ခြေထောက်တွေနှင့် ထရပ်လိုက်ကာ အောက်ခံ ဘောင်းဘီချထားခဲ့ရာ သစ်ပင်အောက်ခြေကို လှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်။ ဘောင်းဘီမှာလည်း အဖြူရောင် သိပ်မပီသချင်တော့။ အသေ အချာလျှိုပြီး ပြန်ဝတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေ ထားခဲ့ရာဘက် လမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်လာလိုက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ ရသေးဘူး အခုအချိန်ထိ။ ကျွန်တော့် ကွာတားဘောင်းဘီနှင့် တီရှပ်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ကားဆီပြန်လျှောက်လာခဲ့ပါရဲ့။ ကားပေါ်ရောက်ပြီး ပါကင်ထိုးရာနေရာကနေ ထွက်ခွာချိန်မှာ ကျွန်တော်လာခဲ့ရာလမ်းအတိုင်း လူငယ်လေးသုံးယောက် လာနေကြတာ ကိုမြင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း 'Hi' လို့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး မောင်းထွက်လာခဲ့တာပေါ့လေ။ နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်နေပြီကိုး ....ဟူး။
ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့ ရေမိုးချိုးသန့်စင်ကာ ညစ်ပေနေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို လျှော်မည့်ခြင်းထဲ ပစ်ထည့်ပြီး အလုပ်ရှိ ရာ ရုံးခန်းကိုသွားလိုက်ပါတယ်။
ကောင်းလိုက်တာ....အခုလိုနေရတော့လည်း ချစ်သူကြောင့် အသည်းကွဲတဲ့ခံစားမှုဆိုတာတွေဟာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ။ စိတ်ရှုပ်ရမှု လည်းမရှိ စိတ်ပင်ပန်းရတာလည်း ဝေးဝေးမှာ...။
'ဟယ်လို....Hi! Good afternoon Sir.'
Alex Aung (17-1-2011)